Nabadeey Bodhi Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Marka ku dhawaaqida Jeff Hoogland, oo ah hormariye hormood ka ah mashruuca Bodhi Linux:
Waan hubaa in qof kasta oo la socday mashruuca Bodhi Linux uu xusay in sii deynta nooca ugu dambeeyay ee 3.0.0 aysan ku dhicin waqti ku habboon. Sababo kala duwan awgood waxaan jeclaan lahaa inaan maanta ku dhawaaqo in aanan mar dambe si firfircoon u horumarin doonin Bodhi Linux.
Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay umuuqataa in uusan kaliya ka tagaynin Jeff kooxda, laakiin midkoodna horumarayaasha asalka ah lama harin:
Waqtigaan, dhammaan xubnihii kale ee asalka ahaa ee kooxda wey baxeen.
Suurtagal, tani waa mid ka mid ah sababaha uu Jeff u go'aansaday inuu dhinac uga leexdo. Ma sahlana in qof keli ahi uu mas'uul ka noqdo dhismaha qaybsi dhammaystiran oo tayo leh, sida Bodhi Linux.
Ololaha Bodhi Linux
Haddii aad aqrinaysid tan oo aad xiiseyneyso inaad la wareegto mashruuca, Jeff wuxuu codsaday inaad la xiriirto. Dhammaan koodhka la xidhiidha Bodhi waxaa laga heli karaa boggooda GitHub Iyo, sida lagu sheegay qoraalkiisa macsalaameynta, Jeff wuxuu aad ugu farxi doonaa inuu ka caawiyo iyaga una sharaxo sida ay wax u shaqeeyaan marka ay bilaabayaan.
Runtu waxay tahay haddii aadan noolaan, waan tabi doonnaa mashruucan aadka u wanaagsan. Waa mid ka mid ah qaybinta yar ee adeegsata iftiinka aadka u-fudud iyo kan xoogga leh Enlightenment desktop desktop. Sababtaas awgeed, Bodhi waa, shaki la'aan, tixraac ka mid ah qaybinta Linux fudud. Shuruudaha nidaamka ugu yar waxaa ka mid ah 128 MiB RAM, 2.5 GB oo meel disk adag ah, iyo processor 300 MHz ah.
Marka waad ogtahay, hadii aad rabto mashruucu inuusan dhiman, waxaa jira waqti ilaa Abriil 2015, oo ah bisha ay martigalinayso bogga rasmiga ah ee mashruuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Nabadeey Bodhi Linux?
Carlos Felipe Pessoa de Araujo dijo
Uma baahni doono. Waxay ahayd goor dambe.
Jawaab Carlos Felipe Pessoa de Araújo
waxay ahayd in lafilo ... xiise mashruuc maan qabin
Intaanan bilaabin, waxaan rabaa inaan cadeeyo in mihnaddeydu aysan aheyn Caafimaadka; waxba in la sameeyo waa nidaamyo ama xisaabinta; taasi waa, anigu waxaan ahay isticmaale.
Kala-jajabku wuxuu u oggolaaday dad badan inay soo saaraan talooyin qiimo leh gaar ahaan waxyaabaha la taaban karo. Waa in aynaan u eegin daciifnimo laakiin inaynu u aragno fursad iyo ku dhowaad xoog maxaa yeelay Linux waa loo wada dhan yahay oo waxay na siisaa fursado badan oo aan kala dooran karno. Xaqiiqdii waxa lagama maarmaanka ahi waa yaa isku dubarida howlaha si loo abuuro ikhtiyaarro xoog badan gaar ahaan barnaamijyada.
Marka laga hadlayo Bodhi, in kasta oo aan haysto dhowr nooc oo Linux ah oo la rakibay, haddana waxaan u arkay inay aad u wanaagsan tahay dadaalka abuurayaashiisuna ay mudan yihiin in la qaddariyo
Jawaab Oscar Bustamante
Waxaa ka mid ah distros badan oo uu jiro mid u heellan cusboonaysiinta Bios? Waxaan isku dayay in aan iftiimiyo bios of acer 5920 waana si xun u iftiimay maxaa yeelay halkii aan ka soo dejin lahaa nooca hoose oo imika ma bilaabayo daaqadaha, kaliya waxa loo yaqaan 'Linux Linux' oo aan rakibay, laakiin sidoo kale Linux waa la saameeyaa waana la qaboojiyaa waqtigaas ma bilaabi karo daaqadaha In kasta oo aan wax ka badalayo darawalka adag, qof ayaa i caawiya, ma doonayo inaan lumiyo laptop-ka.
Jawaab Frank Davila
Isku day wax HirenBoot ah (http://www.hirensbootcd.org/), samee bootable bilaaba WinXP oo ku yimaada sawirka 😉
Caadi ahaan waxaan ka soo billowdaa FreeDOS, laakiin waxaan haystay Acer 5741 oo u adeegsanayay dhaqan madow inuu ku ifiyo.
Gabi ahaanba dami, ka saar batteriga
faylka geli kumbuyuutar madhan, ku xir
taabo Fn + Esc oo taabo awoodda, sii daayo Esc….
Ma xasuusan karo sax, google waa laakiin waxay ahayd nooc qalloocan.
Markii aan ku khasbanaaday in aan sameeyo wershad soo celisa Dell Inspiron oo la timid 64-bit Windows XP, runtu waxay tahay, waxay ahayd ficil ahaan sidii dab loo qabadsiiyay dhowr ulo oo alwaax ah. Runtu waxay tahay ka hor intaysan gebi ahaanba ahayn wax laga naxo in la sameeyo dib-u-soo-celin warshad oo kale ah.
Hagaag waxaan kujiray tillaabooyinkii ugu horeeyay ee bodhi ee golaha dhexena waxaanna ka caawinayay pt.
Markaa kama tagin sababtu waa su'aal ku habboon ama wax uun laakiin waxaa jira kuwa kale oo waxaan u baahanahay inaan la qabsado kombuyuutarradeyda, jilbaha qaarkood isma waafaqsana.
Bodhi waa distoor aad u wanaagsan waxaanan jeclahay iftiiminta, waxa kaliya ee e 19 uusan lahayn ecomorph.
Waa ceeb haddii ay dhammaato, runtii.
Ku jawaab portaro
Marka laga soo tago arrinta ah suurtagalnimada in la waayo Bodhi, waxaan jeclahay E19 iyo isku xirkeeda. Waxa kaliya ee aniga i dhibaya waa ku tiirsanaanta xun ee econnman ee ku xirnaanta internetka. Dhowr maalmood ka hor waxaan rabay inaan rakibo Archlinux anigoo adeegsanaya CD-ga Evo / Lution wax walbana way ku fiicnaayeen E19, xitaa qeybta maareeyaha shabakadda. Waa waxa kaliya ee aan ku necbahay Iftiiminta, haddii kale waa qurux DE.
Waad salaaman tahay waxaan jeclaan lahaa inaad qoraal ka sameyso Canaima Linux 4.1 Stable oo hada qof walba heli karo, iyo fikradahaaga.
Ku jawaab Avelino
Waa wax laga murugoodo in la arko sida loo baabi'iyo 'distro', laakiin marka laga eego dhinaca aragtida way u qalantaa tan iyo markii uu ku darsaday labadiisii ​​senti qaybtii ugu xumayd ee ubuntu / deb.
Taasi waa wax ka yar, halkii aad ka samayn lahayd waxyaabo badan oo aan waxtar lahayn oo sidan oo kale ah, waa inay taageero siiyaan kuwa loo yaqaan ubuntu ama lint mint, haddii kale GNU / Linux waligeed noqon mayso nidaam hawlgal oo run ahaantii la tartami kara Windows ama Mac.
Shakhsiyan, ma doonayo inay la tartanto Windows ama Mac, taas caksigeeda, waxaan door bidaa GNU / Linux inay si uun ula jaan qaadayaan OS-yada kale oo dhan ... haddii ay suurta gal tahay, isla qalabkan.
iyadoo loo maleynayo in Windows nt ay (ama ahayd) mid la jaan qaada posix.
biyo xambaara dijo
Waxaa jira Ubuntu distros oo leh kombuyuutarrada oo dhan sidaas darteed waxaan u maleynayaa inay tahay mid la mid ah E18. Laakiin way fududahay inaad ku rakibto E18 / 19 buntu ama Mint adigoo ku ag samaynaya deegaanka desktop-ka waxaad heli doontaa agabfudud oo softiweer ah oo aadan haysan oo kaliya inaad ku rakibo Enlightenment.
In kasta oo ay xaddidan tahay, waxaan ahay taageere iftiinka haddana waxaan ku hayaa laba mashiin, laakiin Manjaro. Waxaan rakibay Bodhi dhowr jeer oo aan dhowr jeer isku dayay, laakiin runtu waxay tahay inay iga careysiineyso inaan haysto Midori oo aan laheyn awooda Firefox iyo dusha sare waa loeeeeeeeeento. Marka barnaamijka kaliya ee la yimaada Bodhi asal ahaan waa mid isla markiiba isbedelaya. Ku rakibidda shabakadda sidoo kale waa la akhriyaa, laakiin ugu yaraan Bodhi wuxuu lahaa "maareeyaha xirmada" inuu sidoo kale rakibo.
Laakiin waxa ugu xun ee ku saabsan Bodhi wuxuu ahaa keydadkii hore ee Ubuntu. Markii iigu dambaysay ee aan Bodhi rakibo waxaan isku dayay inaan isticmaalo xfburn oo aan lahayn qalabka nooca ugu dambeeya waana inaan badalaa kombiyuutarada si aan u sameeyo.
Manajro "Daabacaadda Bulshada" ee leh Iftiimintu waa tan ugu fiican E18: Saldhiga Arch oo leh keydad casri ah, marin u helka AUR iyo waxyaabo badan oo Agust ah. Waa wax laga murugoodo in la arko dhamaadka mashruuc, laakiin waxaa jira dillaacyo fudud oo wanaagsan (xitaa haddii ay jiraan saldhigyada Ubuntu) iyo ugu yaraan hal disto aad u fiican oo leh E18: Manjaro.
Ku jawaab sideha biyaha
Waa wax laga xumaado in mashruucu dhamaado. Nasiib darrose wax yar ayaan ka ogahay barnaamjiyada. Haddii aan wax badan ogaan lahaa, waxaan ku dhiirrigalin lahaa naftayda inaan gacan ka geysto dayactirka mashruuca bodhi. Aniga ahaan waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee wax ka qora. Dabcan, aniga ahaan, gnu / linux wuxuu uga wanaagsanyahay ms-windows siyaabo badan. Mar alla markii aad barato isticmaalkeeda, sida shaqeeyntiisa iyo xorriyadda ay u leedahay arrimo badan oo aysan barnaamijyada la xiray aysan oggolaan doonin, marnaba ma doonaysid inaad ka tagtid
Ka jawaab xatooyada
Francisco Madiina dijo
nasiib waxaad ku soo degsatay waqtigeeda, waa wax fiican
Ku jawaab Francisco Medina
Waxaan haystaa mini lap msi u135 waxaan rakibay lubuntu, markasta oo badana bogga internetka ayaa shila ama baxa, tani waa wax caadi ah ama waxa ku dhaca sidoo kale ma awoodin inaan ka dhigo mid aqoonsata mashiinka wi fi.
Waxaan u maleynayaa inaan sifiican ugu laaban lahaa Zorin 9 waa mid xasiloon ama mint 17 ah.
Lubunto ayaa i niyad jabisay …….
Ku jawaab Perico
LINE wuxuu kudarayaa xirmo cusub oo istiikarada ah